Iziphumo zokuPakishwa kwesiko kuThengiso lwakho lwe-Ecommerce? | Martech Zone
Enye yeephakeji zokuqala endakha ndazivula ezazibalulekile yayiyiMacBookPro yokuqala endayithengayo. Kubengathi kukutyhilwa njengoko ndavula ibhokisi yesutikheyisi kunye neelaptop kunye nezixhobo ezifakwe kakuhle ngaphakathi. Yayilotyalo-mali olukhulu, kwaye uyabona Inkathalo ethathwe nguApple Ukuqinisekisa ukuba ndiyazi ukuba ikhethekile njengoko ndavula ibhokisi.
Umntu endisebenza naye usebenza kwicandelo lokubonelela ngobuhle. Undibonisile apho ezinye zeemveliso abazizalisekisayo kubaxumi babo zinezikhongozeli, ukusonga, ukupakisha, kunye neebhokisi ezixabisa isixa esikhulu ngaphezu kweoyile efunyenwe ngaphakathi. Kwaye yenza wonke umahluko. Ngokuyila ngokucokisekileyo kunye nokupakisha imveliso, bayakwazi ukuhlawulisa ukuya kuthi ga kwi-4 okanye ka-5 kumaxabiso eoyile yomzimba! Kwaye bazalisekisa amashumi amawaka eemveliso ngosuku.
Sixoxe ngamava okuthenga kancinci, ukufumanisa i Ukuthenga izinto ezisemoyeni kumashumi eminyaka eyadlulayo ukuya Incwadi kaBrian Solis kwintengiso yamava - amashishini aqala ukwamkela ukubuya kwamava.
Ukuphononongwa kweSharh Amakhulu abathengi be-e-commerce abadala abamele icandelo elinqamlezileyo labantu baseMelika. Injongo yayikukuqonda ukhetho lwabathengi malunga nokupakishwa kwesiko kunye nendlela yokuthenga rhoqo kunye nenkcitho echaphazela olo khetho. Isitshixo esisusiweyo kuvavanyo yayikukuba abathengi beprimiyamu (abathengi abachitha ngaphezulu kwe- $ 200 ngenyanga) beka ixabiso elongeziweyo kuyilo lwesiko lokupakisha.
Ukupakishwa kwesiko ngamava okuqala ukuba umthengi we-e-commerce unalo uphawu lwakho, ke ngoko kubalulekile ukwenza umbono wokuqala oncomekayo.
Kuvavanyo, uShorr ufumanise ukuba yi-11% kuphela yabathengi be-ecommerce abonelisekileyo ngokupheleleyo yipakethe abayifumanayo namhlanje. UShorr ufumanise ukuba abathengi ababuyayo bachitha umyinge wama-67% ngaphezulu kunabathengi bexesha lokuqala oko kuqinisa ngakumbi ukubaluleka kokwenza umbono wokuqala opakishwe.
Khuphela iNgxelo yokuPakisha kaShorr
Ayisiyiyo yonke into malunga nokuziphatha, nokuba kunjalo. Xa ingamava awodwa, iipesenti ezingama-37 zabathengi beprimiyamu yabelana ngamava kwi-intanethi! Ngelixa uninzi lwehlabathi lokuvelisa linokujonga ukupakisha njengenkcitho yokusebenza eyimfuneko, mhlawumbi ishishini lakho kufuneka lijonge ukupakisha ngokwesiko njenge urhwebo utyalo-mali. Kukho indawo eninzi yokuphucula - kuphela iipesenti ezili-11 zabathengi abathi bachukumisekile kukupakishwa kwemveliso abayithengileyo.
tags: Ukulindela abathengiUkupakisha kwe-e-commerceeCommerceukupakisha ecommercekwi-infographicukupakishaabathengi beprimiyamuUloyiko
Kutheni iMveliso yeVidiyo ingumba ophambili kunye neendidi ezi-5 zeevidiyo ekufuneka uzenzile
Ukulungiswa kweDatha yeThalenda: Fikelela ngokulula, Coca kwaye ulungiselele idatha yakho yeCRM